Intshayelelo Ividiyo Ukuhlela
Capturing high-umgangatho wevidiyo ayizange sele lula, kodwa capturing ividiyo kuphela inxalenye storytelling nkqubo. Kwaye ayithethi ukuba nkqu kufuneka ibe storytelling ngayo basenokuba lwe i-amava, presenting ulwazi, okanye covering iindaba. Ukufumana ividiyo ukusuka ke ekrwada ifomu a ugqibile, watchable ithayile, kuya kufuneka ukuba abe edited. Abaninzi folks ukuba ividiyo ukuhlela ngu enobunzima kwaye nzima ukufunda.
Oku kunjalo uza ukufunda izakhelo ka-ividiyo ukuhlela. Uza funda indlela ukungenisa baze balungiselele yakho iinkcukacha kwaye impahla yexabiso, indlela trim clips kwaye yongeza kwabo ukuya ummandla wexesha:, kwaye njani sweeten evakalayo. Uza ukufunda malunga umbala kwaye grading, ividiyo iziphumo kwaye ujikeleziso lothunyelo, kwaye ngaphezulu. Kwaye uya kuba learning konke oku xa usebenzisa neyokusebenza iinkcukacha ukuba inikeziwe kunye oku kunjalo.
Ngale ndlela ungalandela enye kwaye ufumane real, izandla-ngomhla amava
Ekupheleni oku kunjalo uza kuba izakhono ukuqala ukuhlela eyakho amaphulo ngoko ke ukuba uyakwazi ukufumana waqala ndizixelela stories of ezizezenu. Thina anayithathela wakha olugqityiweyo isikhokelo kukunceda ukufunda indlela ukuhlela videos, nokuba ukhe ubene nje iyaqala kunye izakhelo okanye ufuna mfundisi ividiyo ukuhlela kwaye emva kowe-imveliso
← Ukhuphele Dating
Dating ngokungaziwayo →